अष्ट्रेलिया चीन विवाद : अष्ट्रेलियाभन्दा चीन कति शक्तिशाली छ ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/अष्ट्रेलिया चीन विवाद : अष्ट्रेलियाभन्दा चीन कति शक्तिशाली छ ?
सिड्नी । अमेरिकाको साथ दिएको भन्दै पछिल्लो समय चीन अष्ट्रेलियासँग अति रुष्ट रहेको छ । चीन र अष्ट्रेलियाबीच व्यापारिक सम्बन्धमा पनि टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ । एक महिना अगाडि अष्ट्रेलियाले अमेरिकाको समर्थन जनाउँदै चीनमा कोरोना भाइरसबारे अनुसन्धान गरिनुपर्ने मागप्रति सहमति जनाएको थियो ।
त्यसपछि लगातार अष्ट्रेलिया र चीनको सम्बन्धमा दरार पैदा भएका छन् । अष्ट्रेलियाबाट आउने ठुलो संख्याका चीनमा आउने विभिन्न सामाग्रीलाई लिएर पछिल्लो समय दुई देशबीच गर्मागर्मीको अवस्था रहेको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार अष्ट्रेलियाका सामाग्रीमा चीनले ८० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाबाट आउने विफमा समेत चीनले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै रोक लगाएको छ ।
पछिल्लो समय यी दुई देशबीच को कति शक्तिशाली भन्ने पनि चर्चा चलेको छ । अष्ट्रेलियाभन्दा चीन अधिक शक्तिशाली देश हो । विश्वकै शक्तिशाली देशको रुपमा परिचीत चीन र अष्ट्रेलियाबीचको सैन्य क्षमता कति छ त ?
चीनको मिलिटरी बजेटमात्रै २८८ बिलियन डलर रहेको छ । तर, अष्ट्रेलियाको मिलिटरी बजेट जम्मा २५ बिलियन रहेको छ । सैन्य बलका लागि ३८ करोड ५८ लाख जनसंख्या चीनमा तयार रहेका छन् भने अष्ट्रेलियामा ५३ लाख १६ हजारभन्दा बढी रहेका छन् ।
चीनसँग ७ हजार ७७६० मिलिटरी ट्यांक रहेका छन् । तर, अष्ट्रेलियासँग जम्मा ५९ वटा ट्यांक रहेका छन् । त्यस्तै चीनसँग लडाकु सवारीसाधन ६ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । अष्ट्रेलियासँग २५८० वटा रहेका छन् ।
चीनसँग कुल आर्टिलरी ९७२६ रहेका छन् । अष्ट्रेलियासँग जम्मा २३५ वटा रहेका छन् । चीनसँग स्वचालित आर्टिलरी १७१० वटा रहेका छन् । अष्ट्रेलियासँग एउटा पनि रहेको छैन । त्यस्तै चीनसँग रकेट आर्टिलरी १७७० वटा रहेका छन् भने अष्ट्रेलियासँग एउटा पनि रहेको छैन ।
चीनसँग कुल ४१८२ वटा एयरक्राप्ट रहेका छन् । अष्ट्रेलियासँग ४५० वटा रहेका छन् । त्यस्तै चीनसँग फाइटर इयरक्राप्ट ११५० वटा रहेका छन् । चीनसँग मल्टीरोल एयर क्राप्ट ६२९ वटा रहेका छन् भने अष्ट्रेलियासँग ९७ वटा रहेका छन् ।
त्यस्तै चीनसँग ११७० वटा सैन्य हेलिकप्टर रहेका छन् । अष्ट्रेलियासँग जम्मा १८७ वटा रहेका छन् ।चीनसँग कुल नाभल ७८० वटा रहेका छन् । अष्ट्रेलियासँग ४९ वटा रहेका छन्